Zinedine Zidane Oo Sharraxay Sababta Aanu Waligii Tababare Ugu Noqonayn Manchester United - GOOL24.NET
Zinedine Zidane Oo Sharraxay Sababta Aanu Waligii Tababare Ugu Noqonayn Manchester United
Zinedine Zidane ayaa sharraxaad ka bixiyey sababta aanu waligii u noqonayn tababaraha Manchester United, inkasta oo marar badan lala xidhiidhiyey Old Trafford.
Halyeyga Faransiiska ayaa sheegay inuu dib ugu soo noqonayo tababarenimada kaddib sannad uu ka maqnaa garoomada kaddib markii uu ka tegay Real Madrid bishii May ee sannadkii hore. 49 jirkan ayaa iska diiday inuu tago PSG xagaagan, waxaana loo badinayaa in uu la wareegi doono xulka qaranka France oo uu ka beddelayo Didier Deschamps.
Madaxweynaha waddanka Faransiiska ee Emmanuel Macron ayaa dhowaan sheegay inuu doonayo in Zidane uu kusoo noqdo horyaalka Ligue 1 laakiin doonistaasi uma hirgelin, inkasta oo shaqada uu qaban doono ZIZOU ay u badan tahay inuu hoggaamin doono xulka qaranka France.
Manchester United ayaa marar badan isku dayday inay heshiis la gasho Zidane, gaar ahaan waqtigii uu shaqada ka tegayay Ole Gunnar Solskjaer iyo sidoo kale ka hor intii aanay xulanin Erik ten Hag.
Zinedine Zidane oo waraysi siiyey wargeyska Marca ayaa la weydiiyey sababta uu u diiday Manchester United, waxaanu ku jawaabay: “Miyaan anigu doonayay in aan tago Manchester United? Waan fahamaa Ingiriiska, laakiin si fiican uguma hadli karo. Waxa aan ogahay in ay jiraan tababareyaal taga naadiyo iyaga oo aan ku hadal luuqadda dalkaas, laakiin anigu si ka duwan ayaan u shaqeeyaa.
“Waxyaabo badan ayaa horseeda in aad ku guuleysato ciyaartaada, waana mowduucyo caalami ah. Anigu waxa aan u baahanay in aan guuleysto.”
Sababta ugu weyn ee aanu Zidane u tegaynin Manchester United ayuu ku sheegay in aanu si fiican ugu hadli karin luuqadda, taasna ay saamayn ku yeelanayso shaqadiisa maadaama uu doonayo in uu guuleysto.